Waa kee goolkii ugu qurxoonaa todobaadka ee tartanka Champions League? – Gool FM
Waa kee goolkii ugu qurxoonaa todobaadka ee tartanka Champions League?
(Catalonia) 04 Abriil 2016. Goolkii quraxda badanaa ee uu Luis Suarez sida dhul ma dhacdada ah uga dhaliyey Arsenal wareegii 16-ka Champions League lugtii labaad ee ka dhacday Camp Nou ayaa loo aqoon saday goolkii toddobaadka, waxaana bixisa Nissan.
Laacibka Uruguay waxa uu dhameystiray isku dhiib dhiibyo habeesnaa oo ay Barca ku sameeyey aga gaarka goolka kahor inta uusan lugta la helin laad jan jeerkii Dani Alves.
Waxa uu ahaa goolkii lixaad ee uu 29 jirka ololahan Champions League ka dhaliyo, taas oo la sintay inta uu leeyahay Lionel Messi, laakiin waxa uu 7 ka hooseeyaa xiddiga hogaaminaya kala sareynta goolasha ee Cristiano Ronaldo.
Waa markii labaad ee uu Suarez ku guuleysanayo abaal marintan kaddib goolkiisii halista ahaa ee uu ugu shubay Bayer Liverkusen.
Luis Suarez waxa uu tartanka goolkaas uga guuleystay xiddigaha kala ah: Kingsley Coman, Diego Costa, Mohamed Elneny iyo Juan Cuadrado.
Halkan guji si aad u daawato goolka Luis Suarez
Shaki la'aan Yaya Toure oo ka tagaya Man City (Halkuu ku jeedaa?)
Antonio Conte oo noqday tababarihii shanaad ee Talyaani ah oo hoggaanka u qabta kooxda Chelsea